अक्षय कुमारले गरे कमाल, केसरी मालामाल, अहिले सम्म कमायो यति करोड ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodअक्षय कुमारले गरे कमाल, केसरी मालामाल, अहिले सम्म कमायो यति करोड !
भारतीय चर्चित अभिनेता अक्षय कुमारको मुख्य अभिनय रहेको फिल्म ‘केसरी’ले रिलिज भएको ८ दिनमा पनि बक्स अफिसमा निकै राम्रो कमाइ गरेको छ ।
फिल्मले रिलिज भएको आज आठ दिन पुग्दा १०५ करोडको कलेक्सन गरिसेको छ । यो वर्ष सबै भन्दा छिटो १०० करोडको कमाई गरेको ‘केसरी’ले बक्स अफिसमा रिलिज भएको ८ दिनको दिनमा पनि ५ करोड ८५ लाखको कलेक्सन गरेको छ ।
२१ करोड ६ लाखको कमाइबाट आफ्नो ओपनिंग गरेको फिल्मले अहिले सम्म १०५ करोड ८५ लाख कमाइ गरिसकेको छ । यो फिल्मले सबै भन्दा छिटो रिलिज भएको ७ मै १०० करोडको कलेक्सन गरेको थियो ।
यो फिल्म होलीमा रिलिज भएको थियो । जसले गर्दा फिल्म रिलिज समयमा ४ दिनको बिदा थियो । अक्षय कुमारको करियरमा यो पहिलो दिनमै यतिधेरै कमाई गर्ने पहिलो फिल्म हो ।
अनुराग सिंहको निर्देशन तथा गिरिश कोहील र अनुराग सिंहको कथा रहेको फिल्ममा हिरो यस जोहोर, अर्जुन भटिया, करण जोहोर, अपूर्व मेहत र सुनिर खेतेरपल निर्माता रहेका छन् ।
December 6, 2017 sutraentertainment Bollywood, Celebrity, Entertainment, News 0